W/Q:-(C/WAAXID KHALIIF) Goormuu Zenawi Noqday Sheekha Ijaazada Siiya Ehlu Sunnaha? | Halganka Online
W/Q:-(C/WAAXID KHALIIF) Goormuu Zenawi Noqday Sheekha Ijaazada Siiya Ehlu Sunnaha?
Posted on Agoosto 17, 2009 by halganka
Yaa naftooda khiyaamay oon Soomaali ka ahayn! Waxaad maqleysaa maxaysato lagu soo tabobaray Itoobiya oo la leeyahay waa ciidan Ahlu Sunnaha Wal Jameeco ah ama ciidankii Dowladda? Miyaan taas loo qaadan karin jeesjees lagu jeesjeesayo diinta Ilaahay iyo qaranimadii Soomaaliya? Zenawi oo gaal ah oo haddana cadowgii koowaad ee Soomaali ah baa ciidamo u soo diraya Gedo, Hiiraan iyo meelo kale iyagoo shacabkii Soomaaliyeed iska dhowranayo halka kuwa saxaafadda sheeganaya ay ku faraxsanyihiin dhibkaas iyagoo dacaayad u sameynaya Zenawi iyo cawaantiisa!.
Marar qaarkood waxaan is dhahaa war dadkeenna Soomaaliyeed waa dad loo abuuray in Tigree iska rartaan! Wax kastood u sheegtid waxaad arkaysaa kuwo ducaad sheeganayaa oo leh: hubka iska dhiga! Kuwo saxaafad sheeganaya oo Tigreega u shaqeeya! Kuwo Bulsho Rayid ah sheegta oo basaasiin ah iyo shacab aad mooddo inay marti ka yihiin waddankooda. Waxay maraysaa meerisyadii gabyaagu ka lahaa qoladuu ku dhashay isagoo leh:
Marka dadkii oo arkaya kheyrka ay Muqaawamadu keentay iyo kala dambeynta haddana laga kari la’ yahay war difaacda waddankiinna! Waxaa ka sii daran is-maaweelinteenna aan leennahay: waxaa is haya Muqaawamo iyo Ahlu Sunnah! War goormaa cawaanta Tigreega u shaqeysa diin yaqaanneen? Maxaa diinta Ilaahay dambiga looga galayaa?
Iyadoo Maraykan, Beel Caalam, gaalo-madow, Ashahaado-la-dirir, kuwo wadaado sheegtay oo Zenawi Ijaazada siiyo meel ah ka soo wadajeesteen ayaad maqlaysaa kuwo sheeganaya magacyo diimeed sida Salifaya Jadiid, Ictisaam iyo magacyo kale oo dadka ku boorrinaya inaan far la qaadin! Horta Insha Allaah huwantan Ilaah waa jabinayaa. Weli Muqaawamada waa isku dhex jirtaa.
Dad dar Ilaahay bey ka tahay halka qaarkood yihiin adduunyo iyo jago doon. Inta la isku dhexjirana sida la arko guushu waa daahdaa. Marka markii la kala baxo oo miiddu isu soo harto waxaa imaanaya Nasrigii Ilaahay.
Waxaan Muqaawamada ku leeyahay horta waxaa dadka idiin ku daran waa kuwii bilaabay mucaskarada iyo dagaallada oo hadda iska fariistay masaajidda. Ilaahay wuxuu yiri: dadka masaajidda camira waa dad aaminsan Ilaahay, maalinta aakhiro, salaadaha ooga, Zekadana bixiya, oon ka baqin cid aan Ilaahay ahayn. Marka qofkii ka baqaya Maraykan ma aha qof camira masjaaidda Ilaahay. Maanta waa la kala baxayaa ee samra.
Waxaan Muqaawamada kula talinlahaa yeysan ka dhinac dagaallamin dad aan wax maqleyn oon kala dambeyn lahayn. Ilaahay waa idin kala saarayaa. Markay soo harto dad ismaqlaya oo amiirkooda maqlaya waxaa imaanaya guusha Insha Allaah. Waxaa tusaale idiin ah markii dagaalkii Khandaq oo la ogaa cabsidii jirtay. Gaajadii la arkay. Qaboowgii iyo dabayshii. Waatii nabigu (SCW) yiri: yaa noo soo fiirinaya akhbaarta huwanta? Waa tii la waayey saxaabi si mutadawacnimo ah u istaaga ilaa nabiga (SCW) yiri: istaag Xudeyfoow (RC).
Saxaabada nabigu (SCW) Ilaahay raalli haka noqdee markay isdhiibeen oo waxay sameynkareen sameeyeen, Ilaahay keliya baa gaaladii kala ceyrshay.
Sidoo kale waa tan Qur’aanku dhaho: badanaa koox yar oo ka adkaata koox badan idinka Ilaahay dartiis. Waa tii nabi Daa’uud (CS) dilay Jaaluut. Marka inta huwantu soo socdaan waxaa la rabaa in Muqaawamadu is maqasho oo kala-dambeyn la timaaddo.
Mar horaba wataas mooryaantii Tigreegu soo tabobaray baabuurta ku baaraneyso Hiiraan iyo Xamarba. Haddaa la arkayaa jirri Dooloow ku soo caqday oo dadka boobaya markay soo galaan magaalooyin. Ugu dambeynta jab iyo halaag baa u dambeeya huwanta.
Marka saxaafadda aad mooddo inay gaalo yihiin oo Zenawi leeyahay, waxaa u fiican inay Ilaahay uga baqaan dacaayadda ay u sameynayaan gaalada oo ay uga soo horjeedaan waddankooda.
Marka Muqaawamada yeysan niyad jabin. Waxaan filayaa inay ahaandoonto weerarkay ku baabbi’i lahaayeen gaalo iyo gaalo-raacyo laakiin waxaa ka horreeya kala-bax iyo imtixaan. Wixii safka Muqaawamada usoo galay jago, marka huwanta soo dhowaato iyagaa qaarna waddanka ka cararayaan qaarna ku biiri doonaan gaalada. Marka la kala baxo ayaa Ilaahay idin guuleynaa ee hala samro. Marka Muqaawamoow samra oo digriga Ilaahay badiya waxaad mudan tihiin inaad liibaantaan.
Marka saxaafadda iyo wax-ma-garadka Soomaaliyeed calooshood-u-shaqeystayaal Zenawi soo tobobaray haku hayeen: waa culumo Ahlu Sunnaha wal Jamaaco ah. Teeda kale xaggee Salafiyo Jadiidah iyo Ictisaam ka galayaan nimankaas Zenawi soo tabobaray?
« Shabakada baraawecity.wordpess.com oo lagu xiray inuu islaamka u shaqeeyo iyo war bixin kooban Afhayeenka Maamulka Mujaahidiiinta Islaamiga Jubooyinka Sheekh Xasan Yacquub”Wadanka Waan ka Saareynaa Gaalo Raacyada Calankii Towxiidka ku Qornaa Gubey Gabdhaha Islaamka ahna Jalbaabka u Diidey. »